AyeyarWady Division, Myanmar (Burma)
NOthinG SPeciAL ! JUst A NOrmAL PErsON!
မဇ္ဈိမဒေသမှ လေ့လာစရာ နေရာဒေသများ - ၁၁ (ဗာရာဏသီ)
သဒ္ဓမ္မရံသီဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ထေရုပ္ပတ္တိတော်နှင့် အန္တိမအဂ္ဂိဈာပနပူဇာပွဲသဘင် အခမ်းအနားအစီအစဉ်
ဘ၀သစ္စာ အဖြေရှာကဏ္ဍ (၁)
သင့်အတွက် ဝတ္တုများနှင့် ကဗျာ
နေ့ စဉ် သတင်းများ
ကျွန်တော်ချစ်သော မန္တလေး
မြန်မာ MOVIE ,VCD ,MP3 SONGS
mp3 တွေ download လုပ်ကြမယ်
အားကစား ဆိုင်ရာ လင့်များ
တိုက်ရိုက် အားကစား ရလဒ်များ
ချစ်သော အာဆင်နယ် ဝက်ဘ်
အင်တာနက်မှာ စက္ကန့်ခြောက်ဆယ် တိုင်း ဘာတွေ ဖြစ်ပျက် နေသလဲ....
-Google တွင် ရှာ ဖွေ မှု ပေါင်း ၆၉၄၄၄၅ ရှာ ဖွေ ကြ သည်။ -Flickr ဓါတ်ပုံ ဝက်ဘ် ဆိုက် သို့ ပုံပေါင်း ၆၆၀ဝ Upload လုပ်ကြသည်။-Youtube သို့ ဗီဒီယို ၆၀ဝ ကျော်လွှင့်တင်ကြသည်။-Facebook ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် Status Updates ၆၉၅၀ဝ၀၊ Wallpost -၇၉၃၆၄ နှင့် Comments ၅၁၀ဝ၄၀ ရေးသားကြသည်။-Domain အသစ် ၇၀ ကျော် မှတ်ပုံတင်သည်။-အီးမေးလ် ၁၆၈၀ဝ၀ဝ၀ဝ ပို့လွှတ်ကြသည်။-Twitter တွင် အကောင့်သစ် ၃၂၀ နှင့် ရေးသားမှု ၉၈၀ဝ၀ ပြု လုပ်ကြသည်။-iPhone Application ပေါင်း ၁၃၀ဝ၀ ကျော် Download လုပ်သည်။-Tumblr Block တွင် ပို့စ်အသစ် ၂၀ဝ၀ဝ ကျော်ရေးသားကြသည်။-FireFox Browser ၁၇၀ဝ၀ ကျော်ကို Download လုပ်ကြသည်။-Wordpress ကို အကြိမ် ၅၀ ကျော် Download လုပ်ကြသည်။-Wordpress Plugin ၁၂၅ ခုကို Download လုပ်ကြသည်။-Networking ဆိုက် Linkedin တွင် အကောင့် ၁၀ဝ ကျော်ပြုလုပ် ကြသည်။-Yahooanswers.com သို့ မေးခွန်း ၄၀ ကျော်မေးမြန်းကြသည်။-answers.com သို့ မေးခွန်း ၁၀ဝ ကျော် မေးမြန်းကြသည်။-သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တင်သည်။-Urban Dictionary.com တွင် စကားလုံးသစ်တစ်လုံးတိုးသည်။-Craigslist တွင် ကြော်ငြာ ၁၂၀ဝ တက်သည်။-Skype အသုံးပြုသူများက မိနစ်ပေါင်း ၃၇၀ဝ၀ဝ ကျော် စကား ပြောဆိုကြသည်။-Internet Radio Pandora မှ သီချင်းများကို ၁၃၀ဝ၀ နာရီအထိ နားဆင်ကြသည်။-Online စာကြည့်တိုက်Scribd မှာ အကြောင်းအရာ ၁၆၀ဝ ကို ဖတ်ကြသည်။
(New Business Journal မှကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်) Posted by
flash movie maker ..
အဆင့်(၁) size and sound မှာကလစ်နှိပ်လိုက်ပါအဆင့်(၂) width မှာ 1000 Height မှာ 800 လောက်ထားလိုက်ပါအဆင့်(၃) နံပါတ်(၃)နေရာအ၀ိုင်းလေးထဲကို အမှန်ခြစ်လေးခြစ်ပေးပါအဆင့်(၄) Browse မှာကလစ်နှိပ်ပြီး သီချင်းတစ်ပုဒ်ထည့်လိုက်ပါ
နောက်ခံအတွက်ပါ ကာလာနှင့်ထည့်ချင်လားဓာတ်ပုံနဲ့ထည့်ချင်လားနှစ်မျိုးရှိပါတယ်.. Background ဆိုတဲ့နေရာမှာကလစ်လုပ်လိုက်ပါနောက်ခံကို ကာလာနဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် အနီဝိုင်းအသေးလေးထဲကိုကလစ်နှိပ်ပြီးအပြောက်လေး(ဟီးးဘာပြောရမလည်း) အဆက်လေးလုပ်လိုက်ပါနောက်ပြီး အနီအ၀ိုင်းကြီးပြထားတဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရောင်နှစ်မျိုးရွေးလိုက်ပါနောက်ခံကိုဓာတ်ပုံနဲ့ထည့်ချင်ရင်တော့အပြာရောင်အ၀ိုင်းလေးထဲကိုအမှန်ခြစ်လေးခြစ်ပေးပါနောက်ပြီး Add နေရာမှာကလစ်နှိပ်ပြီးပုံထည့်လိုက်ပါနောက်ပြီးအောက်မှာမြင်နေရတဲ့ လေးထောင့်အကွက်ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါဓာတ်ပုံကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ထားချင်းလည်းကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ကြည့်လိုက်ပါဟိုအောက်မှာပြထားတဲ့ဖလတ်စောင်းထဲကအတိုင်းလုပ်ချင်ရင်တော့နံပါတ်(၃)နေရာမှာ Tile ကိုထားလိုက်ရင်ပုံတစ်ပုံထဲနဲ့အများကြီးဖြစ်သွားမှာပါ
ဒီမှာတော့ စာရေးပြီးထည့်ချင်ရင်..ဓာတ်ပုံတွေ ဟိုပြေးဒီပြေး ဂျွန်းထိုးနေတာမျိုးတွေလုပ်ချင်ရင်တော့Text and image မှာကလစ်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အနီရောင်လေးထောင့်ကွက်ထဲကစာတွေကိုအရင်ဖျက်လိုက်ပါမျှားပြထားတဲ့အနီရောင်ကြက်ခြေခတ်လေးကိုကလစ်လုပ်ပြီးဖျက်လိုက်ပါအဲ့စာတွေကိုမသိလို့မဖျက်ပဲထားရင်အဲ့စာတွေကရှုပ်နေတာလေစာတွေဖျက်ပြီးရင်အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါ
ဓာတ်ပုံတွေကိုအရင်ထည့်ပါ့မယ် ကိုထည့်ချင်သလောက်သာထည့်လိုက်တော့Add image မှာကလစ်နှိပ်ပြီးပုံထည့်လိုက်ပါ..တစ်ပုံချင်းပဲထည့်လို့ရမှာနော်အပြာရောလေးထောင့်ကွက်ထဲကိုကြည့်လိုက်ပါအဲနေရာမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးထားချင်လည်းကြည်လိုက်ပါဦးစွာပထမတော့ Center မှာပဲထားလိုက်ပါကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ပုံကအကြီးကြီးဖြစ်နေရတော့ မျှားပြထားတဲ့နေရာကနံပါတ်လေးတွေကိုပြောင်းပေးပါ ဆက်လျှောက်အောက်ပုံ
ကျနြော်ပထားတာလေးပဲအရင်လုပ်ကြည့်လိုက်ပါပုံတွေအတွက် Effect ထည့်ဖို့အတွက် Effect မှာကလစ်နှိပ်လိုက်ပါအောက်မှာကြည့်လိုက်ပါ လေးမျိုးရှိပါတယ်Fly ဆိုတာလေးကိုကလစ်နှိပ်ပြီး အဆက်လေးလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်..အင်းဒီနေရာတော်တော်ရှုပ်တယ်အောက်မှာတင်ထားတဲ့ဖလတ်စောင်းလေးထဲကအတိုင်းပဲပြောပြမယ်နော်ကြံတာတော့နောက်မှပဲလုပ်ကြည့်ကြပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ Fly ဆိုတဲ့နေရာမှာအဆက်လေးလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ပုံအ၀င်အထွက်လေးတွေကို အပြာရောင်လေးထောင့်ကွက်ထဲကြည့်လိုက်ပါအပေါ်က Fly in form left ဆိုရင်ဘယ်ဘက်နေထွက်လာမယ်အောက်က Fly out to top ဆိုရင် အပေါ်ကိုတက်သွားမယ်ပုံလေးက ဘယ်ဘက်ကနေထွက်လာပြီးအလယ်ရောက်တာနဲ့အပေါ်ကိုတက်သွားပါ့မယ် အဲတာတွေမလုပ်ပဲထားရင်တော့ဘယ်ဘက်ကနေထွက်လာပြီးဘယ်ဘက်ကိုပြန်ဝင်သွားပါတယ်ပုံတွေအများကြီးထည့်ရင် အဲနေရာလေးမှာအမျိုးမျိုးပြောင်းပေးလိုက်ပေါ့နော်..ဟီးး
ဒီနေရာမှာတော့ Effect တွေအများကြီးရှိပါတယ်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုကလစ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါမျှားပြထားတဲ့နေရာမှာတော့ ကိုယ်လုပ်လိုက်တဲ့ Effect တွေအများကြီးရချင်ရင်အပေါ်ဆုံးကနံပါတ်လေးကိုပြောင်းပေးပါအောက်ပဟာလေးတွေကတော့ Effect အရောင်းလေးတွေပြောင်းတဲ့ဟာပါကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရောင်းလိုက်ပေါ့နော်.....
ဒါကတော့ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကို Link တွေချိတ်ချင်ရင်ပေါ့ Link တွေချိတ်တာကိုမသိရင် အောက်မှာတင်ထားတဲ့ဖလတ်စောင်းထဲကပုံလေးတွေ..စာလေးတွေကလစ်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ..အခြားတစ်နေရာရောက်သွားပါ့မယ်အဲလိုမျိုးတွေလုပ်ချင်ရင်ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ..မလုပ်ချင်သူများတော့ဒါကိုကျော်သွာလိုက်ပါ...ဟိုအောက်မှာကြည်လိုက်ပါLinkချိတ်ချင်သူများကတော့စမယ်ပေါ့နော် Web link ဆိုတာလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပြာရောင်အ၀ိုင်းလေးပြထားတဲ့နေရာလေးမှာအဆက်လေးလုပ်လိုက်ပါအနီရောင်အ၀ိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးမှာလည်းအဆက်လေးလုပ်လိုက်ပါအဲနေရာမှာတော့နားတော့မလည်းဘူး..မလလုပ်လည်းရပါတယ်အပြာရောင်လေးထောင့်ကွက်ထဲမှာကြည့်လိုက်ပါအပေါ်ကအကွက်ထဲမှာ _blank ကိုထားပါအောက်ကအကွက်ထဲကို ကိုယ်ချိတ်မည့် link ကိုထည့်လိုကပါဒါဆိုရင်ပုံနဲ့ link ချိတ်ပြီးပေါ့နော်
ဒါကတော့စာတန်းစာကြောင်းစာလုံးထည့်ချင်ရင်တော့Add text ဆိုတာလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါအခုမြင်နေရတဲ့အကွက်လေးထွက်လာပါမယ်အဲအကွက်ထဲကိုစာရေးရမှာပါအဲထဲမှာရေးရင်တော့မြင်နေရတဲ့အတိုင်းပါပဲတစ်နေရာရာမှာရေးပြီး copy ကူးပြီးထည့်လိုက်ပါပြီးရင် okလုပ်လိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာတော့ ဟိုအောက်ကအနီရောင် Tiဆိုတဲ့အ၀ိုင်းလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် font နေရာမှာ zawgyi.one ကိုထားလိုက်ပါအနီရောင်မျှားပြထားတာက font ဆိုက်ကြီးသေးလုပ်တာပါအပြာရောင်မျှားပြထားတဲ့နေရာမှာက စာလုံးအရောင်ပါပထမနေရာက စာလုံးအရောင်ပါ..ဒုတိယနေရာက နှစ်ထပ်အရောင်ပေါ်အောင်လုပ်တာပါနှစ်ထပ်အရောင်ပေါ်ချင်ရင်တော့အပြာဝိုင်းလေးပြထားတဲ့နေရာမှာ 2..3..4 ကြိုက်ရာထားလိုက်ပါzawgyi ဖေါင့်ပြောင်းတဲ့နေရာမှာနဲနဲတော့ခက်တယ်ဗျ တစ်ခါတန်းပြီးပေါ်မလာဘူးအဲတာကိုစိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ ဖျက်လိုက်ပြန်ထည့်လိုက်လုပ်ပေးပါကျနော်တော့အဲပဲလုပ်နေ၇တာ..ပြီးရင် ok လုပ်လိုက်ပါ
ဒါကတော့ စာတန်းလေးတွေအတွက် Effect ထည့်ရပါမယ်ကိုယ်ကြိုက်ရာကလစ်နှိပ်ကြည့်ပြီးလုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
ဒါကတော့စာတန်းလေးတွေနေရာချပေးရမယ်ဟာပါposition ဆိုတာလေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါအနီရောင်အ၀ိုင်းလေးကဟာကို အဆက်လေးလုပ်လိုက်ပါပြီးရင် အပြာရောင်လေးထောင့်ကွက်ထဲကနေရာလေးတွေမှာနံပါတ်လေးတွေပြောင်းပြီးစာတန်းလေးရွှေ့ပေးလိုက်ပါleft ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်လေးတွေများပေးရင် ညာဘက်ကိုရွေ့သွားပါတယ်top ဆိုတဲ့နေရာမှာနံပါတ်လေးတွေများပေးရင်အောင်ကရွေ့သွားပါတယ်အောက်မှာတင်ထားတဲ့ဖလတ်စောင်းထဲကအတိုင်းဖြစ်အောင်တော့ဒီလိုနံပါတ်လေးတွေနဲ့ရွှေ့ပေးရပါတယ်
ဒါကတော့စာနဲ့ link ချိတ်ချင်ရင်ပေါ့အပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲအနီရောင်အ၀ိုင်းလေးတွေထဲကဟာလေးကိုအဆက်လေးလုပ်ပေးလိုက်ပါပြီး၇င်အပြာရောင်အကွက်ထဲက အပေါ်နေရာမှာ _blank ကိုထားပါအောက်ကအကွက်ထဲကိုကိုယ်ချိတ်ချင်တဲ့ link ကိုထည့်လိုက်ပါ link မချိတ်ချင်သူများကတော့အောက်ကိုပဲကျော်ကြည့်လိုက်ပါ
စာနဲ့ link ချိတ်ရင်ဒီနေရာလေးပိုလာတယ်ခင်ညာအ၀ိုင်းပြထားတဲ့နေရာလေးတွေမှာအမှန်ခြစ်လေးတွေခြစ်ပေးလိုက်ပါခြစ်မပေးရင်လေ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နဲ့နေပါတယ်ခင်ညာဒါကတော့ LINK ချိတ်ချင်သူတွေပဲလုပ်ပါ
အားလုံးအိုကေပြီဆိုရင် သိမ်းမယ် save မယ်ပေါ့နော်အောက်မှာရှိတဲ့ Publish ဆိုတာလေးကိုအရင်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်အပေါ်က Publish ကိုထပ်ကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာတော့အပေါ်ဆုံးနေရာမှာအဆက်လေးလုပ်လိုက်ပါပြီးရင် ok လုပ်လိုက်ပါ
ဒီနေရာမှာတော့ အပေါ်ကအကွက်လေးထဲမှာ နာမည်လေးတစ်ခုခုရေးလိုက်ပါအောကျကအကွက်လေထဲမှာတော့ Flash movie(swf) ထားလိုက်ပါပြီးရင် save ကိုပဲကလစ်နှိပ်လိုက်ပါ
လိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျနော်လည်းသိပ်ပြီးလည်းနားမလည်ပါဘူးကျနော်လုပ်တဲ့နည်းအတိုင်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်..သီချင်းနဲ့စာသားနဲ့ဘယ်လိုညီအောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတော့ကျနော်လည်းမလုပ်တတ်ပါဘူးခင်ဗျာ .... ...ပစ်တိုင်းထောင်.............
ပစ်တိုင်းထောင် ရေးသားခဲ့သော ဘလော့မှကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။။
၈၀၀ ဖုန်းတွေ မြန်မာစာ သုံးနိုင်ပြီ
စီဒီအမ်အေ ၈၀၀ မဂ္ဂါဟက်ဇ်ဖုန်းအချို့မှာ မြန်မာစာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုလို့ရပြီလို့ သိရပါတယ်။ Andriod OS (Operating System) သုံးဖုန်းတွေမှာ မြန်မာစာဆော့ဖ်ဝဲလ်ကို အသုံးပြုလို့ရတာဖြစ်ပြီး ဇော်ဂျီဖောင့်ကို အသုံးပြုထားပါတယ်။ မိမိဖုန်းမှာ မြန်မာစာဆော့ဖ်ဝဲလ် ထည့်သွင်းထားရင် မက်ဆေ့ခ်ျပို့ရင် မြန်မာလို ပို့နိုင်ပြီး လက်ခံတဲ့ဖုန်းမှာ မြန်မာစာဆော့ဖ်ဝဲလ် ထည့်သွင်းထားရင် မြန်မာလိုပြန်လည် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ၈၀၀ မဂ္ဂါဟက်ဇ်ဖုန်းကို ဟန်းဆက်နဲ့ အင်တာနက် သုံးရင်လည်း ဂျီမေးလ်၊ ဂျီတော့ခ်၊ ဖေ့စ်ဘုတ်နဲ့ အခြား ဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ မြန်မာစာကို အသုံးပြု ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ “ကျွန်တော်တို့ဆိုင်က ဝယ်သွားတဲ့ ဟန်းဆက်တွေ မြန်မာစာဆော့ဖ်ဝဲလ် ထည့်ချင်ရင် အခမဲ့ထည့်ပေးပါတယ်၊ အခြားဆိုင်က ဖုန်းတွေလာထည့်ရင် ထည့်ခပေးရမှာပါ”လို့ Anycall ဖုန်းနှင့် ဖုန်းအပိုပစ္စည်း အရောင်းဆိုင်က ကိုကျော်ထူးက ပြောပြခဲ့ကြောင်း ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်နေ့ထုတ် မော်ဒန်သတင်း ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
17Share Memory Stick တွေ လူသုံးများသလိုပဲ အပျက်လည်း များလှပါတယ်။ ကွန်ပျူတာက မသိတော့တာ၊ Format ချခိုင်းတာ၊ ဖိုင်တွေ ထပ်ထည့်လို့မရတော့တာ၊ Capacity အပြည့်မရတော့တာ စသည်ဖြင့် ပြဿနာတွေက စုံလှပါတယ်။ အခုတော့ Format ချခိုင်းတယ်၊ ဒါပေမဲ့ Format ချမရတဲ့ Memory Stick တစ်ချောင်းကို ပြုပြင်နည်းလေးကို ရေးသားပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီထိဆိုရင် TestDisk ရဲ့အပိုင်း ပြီးသွားပါပြီ။ နောက်ထပ် Bootice ကို Run ပါ။ အောက်မှာ ပြထားသလို ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ Perform Format ကို နှိပ်ပါ။ နောက်တစ်ဆင့် ပေါ်လာရင် USB-HDD mode (Single Partition) ကို ရွေးပါ။ Next ကို နှိပ်ပါ။ Dialog box ပေါ်လာရင် OK နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် Format စရိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ရပါပြီ။ စာဖတ်သူရဲ့ Stick အပျက်ကလေး ပြန်ကောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
(ကိုသူရိန် သင်ခန်းစာ မှ ကူးယူတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်) Posted by
ဗုဒ္ဓံ ဓမ္မံ သံဃံ သရဏံ ဂစ္ဆာမိ
တကယ်လို ဒီသီချင်းလေးတွေကြောင့် မိတ်ဆွေ စာဖတ်ရတာ အဆင်မပြေရင် stop လုပ်ပြီးမှ ဖတ်ပါနော်။ကျေးဇူးပါဗျာ။
7 Sultans Casino Casino bonus Casino CASINO AUTOMATEN TRICKS football manager
အင်တာနက်မှာ စက္ကန့်ခြောက်ဆယ် တိုင်း ဘာတွေ ဖြစ်ပျက် ...
Gtalk နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ကိုဖုန်းMessage ပို့ နိုင်
" မေ့ "မွေးနေ့ ဆုတောင်း
လစာ အခွန် တွက်ရအောင်
♣ စေတမာန် အဝေးရောက် သ၀ဏ်လွှာ ကမ္ဘာဦးကျမ်းစာ.........
မြန်မာသူငယ်ချင်းများအဖွဲ့  - မြန်မာသူငယ်ချင်းတွေအားလုံးဆုံဆည်းရာနေရာလေးပါ...
မူပိုင်အမုန်း leftacomment for ထူးလွင်ကျော်
မီးမီးမယ်လ် ၏ ဒိုင်ယာရီ